Tuesday, 21 September 2010 08:12	नागरिक
कांग्रेसको महाधिवेशनमा शुभकामना दिन आएका भारतको प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष एवं सुदुर पश्चिमसँग जोडिएको भारत उत्तराखन्ड राज्यका पुर्व मुख्य मन्त्री भगत सिंह कौश्यारी चार दिन देखि कठमाडौंमा छन्। नेपाल बसाईमा आफु उत्तराखण्डकै कुनै भु-भागमा बसेको अनुभव गरिरहेको बताउने कौश्यारीले राष्ट्रपति लगायत विभिन्न दलका नेतासंग भेटघाट गरिसकेका छन्। नेपाल जस्तो स्रोत साधनले धनी राष्ट्रको स्वर्णिम भविष्य दखेको बताउने उनले नागरिककर्मी श्याम भट्टसँग गरेको कुराकानी।
Friday, 17 September 2010 12:18	नागरिक
जारी महाधिवेशनमा महामन्त्री पदका उम्मेदवार तथा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान उपसभापति प्रकाशमान सिंहसँगको अन्तर्वार्ता-
महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुभएको छ, कस्तो तयारी छ?
जिल्लाजिल्लाबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग भेटघाट चलिरहेको छ। उहाँहरूसँग मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई ध्यानमा राखेर मतदान गर्न आग्रह गरेकोछु। महाधिवेशनले स्थापित गर्ने नेतृत्वले राष्ट्रिय राजनीतिलाई डोर्‍याउनुपर्छ। हाम्रा नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गर्नुभएको शान्ति प्रक्रिया तात्विक निष्कर्षमा पुर्‍याउन, समयमै नयाँ संविधान लेख्न महाधिवेशनपछि आउने नेतृत्वको ठूलो भूमिका हुन्छ। त्यसैले सैद्धान्तिक अडान लिनसक्ने नेता अहिलेको आवश्यकता हो। अहिले कांग्रेसभित्र सबैभन्दा अडान लिनसक्ने नेता सुशील कोइराला हुनुहुन्छ।
केन्द्रीय सदस्यको प्यानल बन्दैन
Thursday, 16 September 2010 18:11	नागरिक
विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस-
महामन्त्रीको उमेदवार बन्नुभएको छ, कस्तो छ तयारी?
यो पार्टीको आन्तरिक चुनाव हो। म अहिले पनि महामन्त्री छु, महाधिवेशनको तयारी पनि गर्दैछु। महामन्त्रीको जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्‍यो। अर्कोतर्फ उमेदवार भएपछि त्यसको तयारी पनि गर्नैपर्‍यो।
गुटबन्दी साँघुरिँदै छ-नरहरि आचार्य
Wednesday, 15 September 2010 09:30	नागरिक
कांग्रेसको तेस्रो धारबाट महामन्त्री उम्मेदवार बन्नुभएको छ। कस्तो तयारी छ?
साथीहरूसँगको संवादलाई महत्व दिएका छौं। साथीहरूको विश्वास जित्‍नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण होजस्तो लाग्छ। कांग्रेसमा परिवर्तनको चाहना तीव्र छ, थुप्रै असन्तोष र असन्तुष्टि छन्। सबै विषयको ठोस निर्णय महाधिवेशनबाटै गर्ने हो भन्ने हामी बुझाउँदै छौं। समर्थन बढ्दै छ भन्ने अनुभव भएको छ।
शान्तिसम्झौतालाई परिवर्तन गर्ने अधिकार यो सरकारलाई कसले दियो?
Thursday, 09 September 2010 08:57	नागरिक
अनमिन विवाद बारे नागरिकन्युजकर्मी भोजराज भाटले माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईसँग गरेको कुराकानी-
सरकारले राष्ट्रसंघमा पठाएको पत्रबारे तपाईंको टिप्पणी के छ?
अनमिनविरुद्ध जुनखाले अभियान थालिएको छ, त्यो ठीक होइन। शान्ति प्रक्रिया सहज बनाउनका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अनमिन यहाँ छ, आगामी छ महिनाभित्र टुंग्याउनतिर हामी गइरहेका वेला अनमिनको उपस्थित स्वतः अनिवार्य हुन्छ। एकापट्टि अनमिनको औचित्य छैन भन्ने प्रपोगाण्डा मच्चाउने, अर्कोपट्टि अनमिनको कार्यविधि घटाएर मात्र म्याद थप भन्ने आसयको पत्र जुन पठाइएको छ,त्यो शान्ति-सम्झौंताको स्पीरिटविपरित छ। शान्तिसम्झौंताको अर्को हिस्सा माओवादीसँग कुनै सरसल्लाह नगरिकन एकपक्षीय ढंगले कार्यदेश परिवर्तन गर्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन। यो त एउटा कामचलाऊ सरकार हो।
'प्रधानमन्त्री चयनमा मैले केही अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन'
Tuesday, 07 September 2010 11:03	नागरिक
संसद्ले छपटकको निर्वाचनबाट पनि प्रधानमन्त्री चुन्न नसकेपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। उनले विशिष्ट अधिकार प्रयोग गरी नतिजा निकाल्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको आरोप लगाइएको छ। नतिजा नआउने निश्चित हुँदाहुँदै पटकपटक चुनाव गराएको र व्यवस्थै बद्नाम हुन लाग्दा पनि मूकदर्शक भएको उनीमाथि आरोप छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचनको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर उनीसँग माधव ढुङ्गेलले गरेको संवाद :
पार्टीलाई पूर्ण एकता दिन्छु- शेरबहादुर देउवा
Sunday, 05 September 2010 10:39	नागरिक
कांग्रेसको बाह्रौँ महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तयारी कस्तो छ?
- साथीभाइसँग भेटघाट गरिरहेको छु। यस क्रममा मलाई धेरै साथीहरूको समर्थन देखिएको छ। यो प्रतिस्पर्धा पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो। यसमा साथीहरूको उत्साहजनक सहभागिता देखिँदैछ।
पार्टीको आन्तरिक अभ्यास भन्नुहुन्छ, तर कांग्रेस त गुटमा विभाजित भएर चुनावमा जाँदैछ, तीनवटा गुट स्पष्टै देखियो नि?
- जो-जो, जति उम्मेदवार भए पनि यो पार्टीभित्रको चुनाव हो। पार्टी विधानले दिएको अधिकार सबैले प्रयोग गर्ने हो। विधानअनुसार प्रतिस्पर्धामा जानुलाई कसरी गुटबन्दी भन्ने?
Wednesday, 01 September 2010 11:20	नागरिक
नागरिकन्युजकर्मी रमेश खतिवडाले पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह दोलखा गएदेखि उनको गतिविधि नियाले। उनले त्यहीँ शाहसँग छोटो कुराकानी समेत गरे। प्रस्तुत छ कुराकानीको अंश:
'दुई खेमा मेट्ने अभियान थाल्छु'
Tuesday, 17 August 2010 09:50	नागरिक
काठमाडौं कांग्रेसको सभापतिमा नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्व अध्यक्ष भीमसेनदास प्रधान (५४) विजयी भएका छन्। गणेशमान सिहनजिक रहेर काम गरेका प्रधानले २०५३ मा काठमाडौं कांग्रेसको सदस्य, २०५७ मा सचिव र २०६३ पछि उपसभापति भएर काम गरेका थिए। संविधानसभामा काठमाडौं क्षेत्र नं ६ बाट माओवादी नेता हितमान शाक्यसँग झिनो मतले पराजित प्रधान २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा काठमाडौंमा सक्रिय थिए।
पार्टीकै सल्लाहमा श्याम शरणसँग भेटः बाबुराम
Tuesday, 10 August 2010 10:08	नागरिक
कहिले प्रधानमन्त्रीको लागि चर्चामा त कहिले भारतीय विशेष दूतसँग एक्लै भेटेको आरोप। एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई यस्तै कुराले छाएका छन्, अहिले। उनको पक्ष र विपक्षमा पार्टीमा चर्को स्वर निकाल्नेहरु कम छैनन्। त्यही परिवेशमा नागरिकन्युजका लागि भोजराज भाटले उनीसँग गरेको कुराकानी :